Xusuusihii Fankii Abwaan Xasan Qawdhan Yuusuf | Hangool News
December 25, 2016 - Written by Hangool
AbwaanXasan Qawdhan Yuusuf wuxuu ku dhashay magaalada Hargeysa hillaadii1944-kii. Wuxuu ka bilaabay waxbarashadiisii malcamaddii la odhan jirey ‘’Saqadhi ‘’oo ku taalay hadaanta hargeysa . Dugsiga hoose dhexe isna wuxuu ka bilaabay ‘’School Riis‘’. Abwaanku kumuu raagin waxbarashadii dugsiga hoose dhexe ee waa isaga tagey isagoo fasalka afraad maraaya . Wuxuu shaqadiisii koobaad ku bilaabay ‘’ Boynimo‘’.Intaas ka dib wuxuu noqday Kuug ama cunno sameeye wanaagsan . Xirfadaha kale ee uu bartay kadib waxaa ka mid ahaa ; Darawalnimada iyo turjumidda afafka qalaad maadaamuu waddamo afrika oo dhan uu badankooda maray ay u saamaxday inuu luuqadahooda barto . Fanka iyo hal-abuurnimada waxuu ii sheegay inuu xiisayn jirey isagoo da’ahaan yar . Lagama waayi jirin dhinacyada odayaasha sheekaysanayaa iyo cid kastoo hibo u leh hal-abuurka . Waxay u yaqaaneen ; nin yaroo nin weyn ah . Abwaanku wuxuu tagey Xamar sanadkii 1961-kii isagoo markiiba ka hawl galay ha’ayadda ‘’ USAID ‘’ .Markii ugu horeysay ee uu wax curiyo gugiisu wuxuu ahaa 23-jir. Wuxuu sameeyaywakhtigaas hees hirgashay oo uu qaado heesaagii codka macaana eeMaxamed Nuur Giriig AHN. Waa sanadkii 1967-kii.Ereyada heeskaa waxaa ka mid ahaa meerisyadan ; Meeqaam nin mudan , oo miiganaa , intaad maamusheen , miidaamiseen , waxaad tahay mid baaso , lay soo maldahayoo , anigana i mudatee . Abwaanka waxa heestaa markiiba ugu xigtay Riwaayad . Way adkayd in nin dhalinyaraa oo ku cusub masaraxa hal-abuurka inuu sameeyo riwaayad dhamaystiran . Waayo waa hawl nin weyn oo fanka muddo ku soo jirey mooyanee aan looga fileyn qof dhalinyaraa .Riwaayadaas magaceeda waxaa la odhan jirey‘’ Annagoo waalan waagu noo beri ‘’. Waxaa ka qayb qaatay dadyoow tiro badan . Waxaan ka xusi karnaa kuwan ;Maxamed Saleebaan Tubeec Ahn,Axmed Mooge Liibaan AHN, Maxamed Jaamac Joof AHN, Xasan Diiriye, Marwo maxamed, Axmed Good Shimbiriyo qaar kaloo badan.Waxaa ku jirey geeraaro iyo heeso badan oo aanan halkan ku soo koobi Karin qoraalkooda .Waxaa ka mid ahaa heesihii caanka noqday ee ku jirey riwayadaas kuwan ; Miidaamo dhego-maleh , hadduu malag dhawaaqee . Waxaa codkiisa macaan ku qaadi jirey Axmed Mooge Liibaan Ahn .Waxaa kale oo ka mid ahaa ; Diin god gal , good diin gal iyo riyadii xalay , baan rumaystoo , Raaxaan moodoo , waan riyaaqee .
Maxamed Ayax;Inanyow waxaan dooni